Igumbi le-Villa Castel Florentine
U-Florence unokuphawula okungu-65 kwezinye izindawo.
Ngaphakathi isakhiwo esikhulu yangasese, endaweni ethule futhi endaweni yokuhlala aluhlaza, Villa Castel, a 1900 Belle Epoque-isitayela indlu ezinkulu futhi ezinhle nge ukubukwa obumangalisayo esiqhingini La-Pape, izipho ikamelo lezimenywa, igumbi i-Florentine, nge elakhelene yokugezela kanye yangasese ehlukene, ehlotshiswe ngokucophelela. Indawo yokuhlala itholakala imizuzu eyi-10 ukusuka eHholo Ledolobha laseLyon, iCité Internationale, iPart-Dieu, indawo yebhizinisi yasePERICA kanye eduze nemigwaqo ephumayo.
Itholakala esitezi sokuqala sendlu, leli gumbi elihle nelikhulu elibukekayo elingu-20 M² linendlu yokugezela yokuxhumana kanye nendlu yangasese ehlukile.
Ingamumatha abantu abangu-2 noma abathathu.
Ukulwa nobhubhane lwe-COVID 19, kuye kwabekwa uchungechunge lwezinyathelo eziqinile zezempilo:
- Ukungena okunikezelwe ngokukhethekile kubahambi,
- Ukuhlinzeka ngejeli ye-hydro-alcoholic,
- Ukungena komoya okude nokuhlelekile kwezindlu okungenani amahora ama-4,
- Ukusetshenziswa kwe-disinfectant,
- Ukuhlanzwa kochwepheshe kwenziwa kusetshenziswa imaski namagilavu,
- Isikhala sezindlu isikhathi esingamahora angama-24.
Ukuze ukwazi:. Ukuze induduzo kanye nezempilo nokuphepha Sebawoti, kungenzeka kokudla kwasekuseni futhi ukudla ekamelweni, noma, uma isimo sezulu sivuma ke, phezu ithala enkulu Belvedere, e amatafula yangasese, ngandawonye 'ngaso okungenani 5 m.
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-Guest House yethu inamanye amagumbi nama-suites atholakalayo ukuze aqashwe, njengamagumbi e-La Pape ne-Pavillon kanye ne-La Pape ne-Pavillon Suites.
Ukuze uthole ukuthula okwengeziwe nokuzimela, lesi sakhiwo sinendlu ezimele enefenisha engu-80 M², elayisha abantu abayi-6, etholakala endaweni engamamitha angama-50 ukusuka endaweni yokuhlala yase-Belle Epoque.
Indlu yethu yezivakashi isendaweni ekahle, ngaphakathi kwendawo enkulu yangasese eqhele ngamakhilomitha ayi-7 ukusuka eLyon futhi eduze nemigwaqo ephumayo, endaweni ethule neluhlaza okotshani emaphethelweni eRhône. Uzokwazi ukufinyelela emizuzwini emi-5 ngezinyawo uye osebeni lwe-Rhone enikeza ithuba lokuhamba ngezinyawo ezinhle noma ukugibela amabhayisikili osebeni lwasendle lomfula futhi okuholela emabhange asanda kuthuthukiswa e-Rhone edolobheni laseLyon.
Ilungele uhambo lwebhizinisi noma ukuvakashela e-Beaujolais naseLyon, indawo yayo yomlando ifakwe ohlwini yi-UNESCO njengeNdawo Yamagugu Omhlaba.
Ukushintshana nezivakashi zethu kwenziwa ngocingo noma nge-imeyili.
Sikhona kule ndawo ngesikhathi sokuhlala kwezivakashi zethu.
Ngaphandle kwesiFulentshi, siphinde sikhulume isiNgisi nesiRashiya.